Ulaxaze ubunesi wasungula inkampani | Isolezwe
Ulaxaze ubunesi wasungula inkampani
intandokazi / 28 March 2019, 06:58am / PHILI MJOLI
UNKK Jeanette Sithole enikezwa isitifiketi uNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu eKZN emcimbini wokuchonywa uphaphe osonkontileka abasebenzisana nalo mnyango asebethuthukile. Isithombe: Sithunyelwe
UKUSEBENZA ngokungagculisi kwezinkampani zokwakha nokubuyela kwabahlengikazi asebethathe umhlalaphansi bezofuna itoho, kuholele ekutheni umhlengikazi aqale inkampani yezokwakha.
UNkk Jeanette Sithole (70) waseCleland eMgungundlovu ongumsunguli wenkampani yezokwakha, iGeanba-s Enterprise esanda kuchonywa uphaphe wuMnyango wesokuHlaliswa kwaBantu, KwaZulu-Natal, ngaphansi kohlelo lokuthuthukisa osonkontileka abasemkhakheni wezokwakha olwaziwa ngele-EyesizweContractor Development Programme ngeledlule.
UNkk Sithole oke waba yiNursing Manager kumasipala waseMsunduzi uthi ubejwayele ukuqasha izinkampani ezizobenzela umsebenzi ongaba ukulungisa okuthile noma ukupenda.
“Kwesinye isikhathi bengiye ngifike kupendwe udonga nohlaka olubambe isivalo ngopende owodwa. Ngizibuze ukuthi sikuphi isidingo sokuqasha inkampani uma izokwenza into obungeke nawe uyenze ungaqeqeshiwe. Le nto yalokhu ikhula ngizitshela ukuthi mina ngingenza okungcono kakhulu kunalokhu engikubonayo. Ngaqala ukuba nenkampani ngisekhona emsebenzini,” kusho yena.
Uqhube wathi umsebenzi ubewuthola okwagcina sekumfakela ingcindezi yokuthi athathe umhlalaphansi.
Uthi ozakwabo babemphendula ngokuthi banesizungu emakhaya yingakho bebuyela emsebenzini.
“Ngendlela eyayingikhathaza ngayo le nto yokuthi abantu baba nesizungu baze bakhethe ukubuyela emsebenzini, ngaze ngakhetha ukuzenzela uphenyo ngathola ukuthi imali isuke isiphelile. Ngazitshela ukuthi nakanjani kumele ngibe nebhizinisi elizongingenisela imali ukuze ingangipheleli engiphume nayo emsebenzini. Lelo bhizinisi kwakungukuvula inkampani yokwakha.
UNkk Sithole usewuGrade 6 kodwa uthi akubanga lula ukufika kulesi sigaba kwadingeka ukuthi azihluphe ngokuthola ulwazi. “Ulwazi ebenginalo ngalubona ukuthi luncane, ngesikhathi ngilokhu ngiqaqiswa umsebenzi ngenxa yokuthi awenziwe kahle. Angizange ngikuthathe ngokuthi ngiyazondwa noma ukulahlekelwa ngazitshela ukuthi kumele ngenze umsebenzi ozokwenza igama lami lihlonishwe noma kungathiwa ngeke ngisayithola inzuzo.”
UNkk Sithole uthe uke wathola umsebenzi wokulungisa ingxenye yebhilidi esiShayamthetho engamahhovisi okugcinwa kwmagugu.
“Ukulungisa ibhilidi elidala kudinga isipiliyoni nobuchule, ngaqala ukulungisa ngo-2017 ngaqeda ngo-2018. Ngijabula kakhulu ngethuba esilinikwe umnyango wezokuHlaliswa kwaBantu nokwesekwa osinikeza kona,” kusho yena.
Okunye athe kwenza umsebenzi wakhe uhlale usezingeni ukuthi akabashintshi abasebenzi labo anabo, uyabasiza bathuthukise amakhono abo.
“Lokho kusiza ngokuthi uma kufika ama-consultant ahlale efica umuntu oyedwa akwazi nokulandelela ukuthi imiyalelo ayishiyile ilandeliwe yini,” kusho yena.